उत्तर कोरियालाई उक्साइरहने ?
उत्तर कोरियाले अन्तरमहादेशीय बालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि अमेरिकी प्रभुत्व झन आक्रोसित हुनपुगेको छ । अमेरिकी समर्थकले आणबिक अस्त्र बनाउँदा पनि क्षम्य हुने, उत्तर कोरियाले बनाउनै नहुने किन ?
निश्चित रुपमा उत्तर कोरियाले आत्मसम्मान जोगाउन र आफ्नो मुलुकको उर्जासंकट समाधान गर्न यस्ता हतियारहरुको परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ । पटक पटक अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई ध्वस्त पार्ने धम्की दिनु, नाकावन्दी गर्नु र अहिले आएर विश्वलाई उत्तर कोरियासँग कुनै कारोवार, सम्पर्क नगर्न आह्वान गर्नुले पनि उत्तर कोरियाको आत्मसम्मान, राष्ट्रियता संकटमा परेको बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो स्वाधीनता बचाउन उत्तर कोरियाले भएभरको शक्ति उपयोगमा ल्याउनुलाई अनुचित मान्न सकिन्न । एउटा स्वाभिमानी र स्वाधीन मुलुकले आफ्नो पूर्ण सुरक्षा खोज्नुलाई गलत कसरी भन्ने ? बरु विश्वले उत्तर कोरियालाई भाइचारामा बाँध्न नसक्नु र एक्ल्याउने प्रयत्न गर्नु कतिसम्म न्यायोचित हा ?
उत्तर कोरियाले अमेरिकी महादेशसम्म मार हान्न सकिने खालको अन्तरमहादेशीय बालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परिक्षण गरेको हो । उत्तर कोरियाली टेलिभिजनमा प्रशासित समाचारमा उत्तर कोरियाले ‘परमाणु राज्य’ बन्ने आफ्नो सपना पूरा गरेको बतायो । ह्वासोङ–१५ नाम दिइएको उक्त क्षेप्यास्त्र गत बुधबार विहान प्रक्षेपण गरिएको थियो । जापानी समुद्रमा खसेपछि उक्त परिक्षणको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ, जापानको निन्द्रा नै उडेको छ । स्मरणीय छ, उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उन आफैले उक्त प्रक्षेपणमा सहभागी भएका थिए ।
जापान आत्तिएर आपातकालीन बैठकमा बस्यो, उत्तरकोरियाप्रति आक्रोस पनि देखायो । अमेरिकाले उत्तर कोरिया ध्वस्त पार्ने चेतावनी पनि दियो । तर उत्तर कोरियाको राष्ट्रवाद चट्टान बनेर उभिएको छ । हामी पनि आणविक शस्त्र मुलुक बन्यो भनेर विजयोत्सव गरिरहेको छ र यो परीक्षण आफ्नो मुलुकको स्वाधीनता बचाउने उत्तम औजार भनेर गर्व गरिरहेको छ । र, यो औजार कसैप्रति लक्षित नभएको र आत्मरक्षा र उर्जा संकट समाधानको उपाय भनिरहेको छ । बिगत लामो समयदेखि उत्तर कोरियाले लगातार मिसाइल परीक्षण गर्दै आएको छ । जसमा उसको इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालेस्टिक मिसाइल पनि सामेल छ ।